Koorsooyinka iyo Guryaha Degaanka - Dugsiga Dhexe ee Bartamaha, Cambridge
Koorsooyinka iyo Guryaha Degaanka
Bixinta Khaaska ah - 20% oo laga jaro khidmadaha wax lagu dhigto ee Sebtember-Diseembar 2020
Ujrooyinka buuxa ee 2020 ee waxbarashada (laga jaro 20% wixii la soo bandhigo):
Ingiriisi degdeg ah GBP 260 asbuucii Saacadaha saacadaha 21 todobaadkii iyo hawlo bulsho / dhaqameed. Waxaa ku jira diyaarinta imtixaanka.
Ingiriisi guud GBP 205 asbuucii 15 saacadaha todobaadkii iyo hawlaha bulshada / dhaqanka 4-5 maalmaha.
Koorsada galabnimo GBP 80 asbuucii Saacadaha saacadaha 6 todobaadkii Talaadada, Arbacada iyo Khamiiskii. Waxaa ku jira diyaarinta imtixaanka.
Qiimo-dhimis dheeri ah ayaa loo heli karaa isdiiwaangalinta dheer ee koorsooyinka Degdega ah, Guud iyo Galabnimada:
4-9 toddobaadkii 5 qiimo dhimis
10-15 toddobaadkii 10 qiimo dhimis
16-23 toddobaadkii 15 qiimo dhimis
24 todobaad ama ka badan 20 qiimo dhimis
Casharo hal-ilaa hal ah: GBP 55 saacad-is-barbar dhig ku-xidhnaan
Kharashka koorsadaada waxaa ka mid ah:
Helitaanka kheyraadka is-barashada
Iskuulka bilaashka ah ee wif-fi
Shahaadada iyo warbixinta koorsooyinka buuxa
Diyaarinta imtixaanka haddii loo baahdo
Waxqabadyo badan oo bulsho iyo dhaqameed
Kharashka koorsadaada kuma jiraan:
Buugaagta naxwaha iyo buugaagta imtixaanka
Dalxiisyada la kala doorto
Ceymiska shaqsiga iyo caymiska
Ku safrida ama ka soo baxa iskuulka baska ama baaskiilka
2020 Qiimaha hoyga:
Xerada Half Board GBP 170 asbuucii
Sariir iyo quraac guri GBP 140 asbuucii
Iskuulka Cunugaaga GBP 130 asbuucii
Wax lacag ah oo lagaa goosanaayo booska lama bixin doono bisha Sebtember-Disembar 2020.
Ujrada gelitaanka kuma jiraan khidmadaha waxbarashada. Waa inaad buug ka qaadataa imtixaanka Cambridge ee ku saabsan 2 bilood ka hor taariikhda imtixaanka.
Taariikhaha Imtixaanka iyo Kharashka 2020
Imtixaanka Taariikhaha Dakhliga Gelitaanka
PET 6 jeer sannadkii GBP 95
FCE 6 jeer sannadkii GBP 151
CAE 9 jeer sannadkii GBP 157
CPE 4 jeer sannadkii GBP 164
IELTS Inta badan GBP 185
Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan booqo www.cambridgeopencentre.org iyo https://ielts.britishcouncil.org/ihlondon
Dabaaldegyada Toddobaadka iyo Safarada
Qiimaha: inta u dhaxaysa £ 22 iyo £ 47 hal maalin-dayaal ah. Fadlan la xiriir Iskuulka qiimaha dalxiisyada dhamaadka wiigga.
Waxaan kugula talineynaa inaad sameysid caymis si aad u daboosho daaweynta caafimaadka, lumitaanka hantida shakhsiga ah iyo kharashka kaa lumay, haddii aad joojiso koorsadaada. Haddii aad ka timid Midowga Yurub, waxaanu kugula talinaynaa inaad keento dukumentiyada saxda ah si aad u hesho daaweyn lacag la'aan ah.
Ka dib markii aad bixisay kharashka iskuulkaaga iyo qarashka guriga, waxaad u baahnaan kartaa inaad bixiso qadada maalmaha fasaxyada, dalxiisyada kala-doorashada, xulashada hawlaha gelinka dambe, u safrida ama ka soo qaadaan madaarka, baska, ama baaskiilka kireysiga ee Cambridge. Waxaad isticmaali kartaa buugaagta dugsiga inta lagu jiro koorsada, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad sidoo kale soo iibsato buugga tixraaca naxwaha marka aad halkan joogtid. Waxaanu kugula talineynaa inaad ugu yaraan £ £ 50 keenaan usbuucii.
Haddii aad isqorto wiig ah marka ay jirto Maalin fasax ah waxaad heleysaa qiimo dhimis todobaadkii. Ma jiraan fasalo maalmeed ee soo socda 2020:
Iskuulku wuxuu xirayaa ciidaha Kirismaska ​​kadib 20 Diseembar 2019 oo fasalada ayaa dib u bilaaban doona Talaadada 7 Janaayo 2020.
Jimco 10 April - Jimco wanaagsan
Isniinta 13 Abriil - Easter Isniinta
Jimcaha 8 May - Maalinta Maajo
Isniinta 25 Maajo - Bankiga Xilliga Fasaxa
Isniinta 31 Agoosto - Bankiga Xilliga Xagaaga
Dugsiga wuxuu xiraa fasaxyada kirismaska ​​laga bilaabo 18 December 2020 ilaa 5 January 2021.
Haddii aad go'aansato inaad fasax qaadato muddada koorsadaada, fadlan nala soo socodsi. Haddii aad fasax ku jirto isbuuc Isniinta-Jimcaha, ma bixin doonno kharashka waxbarashada todobaadkaas. Haddii aad ka maqantahay gurigaaga, waxaa laga yaabaa inaad bixiso khidmad ama qeyb ka mid ah lacagta si aad u sii haysatid qolkaaga.